7 Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Europe ine hupfumi kwazvo tsika uye nhoroondo, ichiita kuti ive nzvimbo inozivikanwa yekuzorora pakati pevafambi vakuru. Minyuziyamu, mumapaki, inoshamisa landmarks, uye kusarudzwa kwakasiyana-siyana kwekudyira. In pfupi, kana iwe uri pamudyandigere pane zvakawanda zvakanaka zvinoshamisa nzira dzekupomba pachako mune chero guta muEurope. zvisinei, maguta mashoma kwazvo ari nyore kufamba uye kuwana kune vafambi vakuru. Paunenge uchironga yako yezororo muEurope, izvo mufambi wese wechikuru anofanira kufunga nezako rekusimba, kuwanikwa kwe zvikuru zvinokwezva uye mabasa, chokufambisa chakanakisa, kuwedzera kune bhajeti uye nguva yekuzorora.
saka, takatora nemaoko mashoma emaguta akanakisa kushanyira muEurope kune vafambi vakuru. saka, unogamuchirwa kutevera rwendo rwedu mu 7 madiki-ane hushamwari maguta muEurope.
Chitima Kufamba kwakanyanya nyore uye Eco-Hushamwari Nzira yekufamba. Thiri nyaya zvakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, Iwo Akachipa ezvitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
1. Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru: Rome, Itari
Roma iguta rakakura kushanyira muEurope kwevakuru vafambi. Guta rekare reRome, zvinonyanya kukwezva, Hotels, uye maresitoreti anowanikwa zvakakwana kune vakuru muwiricheya. Izvi zvinoreva kuti mataundi emigwagwa yedhorobha ese ane mataera emavhiri, uye guta iro roga rakapfava, saka zvisinei neako muviri chikamu, uchaona zviri nyore kwazvo kufamba famba.
Ipo Roma inosvika pakuwanda kwazvo mumwaka wakakura, kana iwe uchifamba kure-mwaka, in fall, semuyenzaniso, iwe unofanirwa kuve neRomania inenge izere kwauri. Pamusoro pe, hotera uye mitengo yekufambisa inowanzo kuderera-mwaka, Uyezve, haufanire kunetseka nezve kurenda mota, nekuti unogona kufamba nyore kuenda kuRoma kubva kwese kwaunoda kuenda kuEurope nechitima. Hapana chakanakira kupfuura chitima kufamba muTrenitalia's yakakurumidza kumhanya neyareni yepamusoro. Pamusoro pekunyaradza uye kukuru pa-chitima basa, iwe unokwanisa kunakidzwa nezvipisheni zvakakosha kumatikiti ezvitima zvevakuru.
2. Milan MuItari
Iyo Duomo naLeonardo De Vinci's 'Yekupedzisira Chirairo' inoita Milan paradhiso yevanoita zvemitambo nevanoda nhoroondo. Kunze kwekunge iri rekuvaka gem, Milan ane hushamwari kune vafambi vakuru uye akatokunda a 2016 EU Access mubairo. Saka Milan nderimwe remaguta akanakisa kushanyira muEurope kune vafambi vakuru.
Kana iwe ukapfuura ako makumi matanhatu uye wagadzirira kugara kwakanaka, ipapo iwe uchave uine nguva inoshamisa kwazvo kuMilan. The Italian chili, ari dzinokatyamadza akitekicha of Basilicas, unyanzvi namaberere, uye mamuseum achaita kuti unzwe senge weumambo. Kana ari kuMilano, unofanirwa kubatana neiyo pasita yekubika yekubika nekuti haina kumbove yakanonoka kuti udzidze iyo yakakwana pasita sosi yekubheka kuitira kuti udzokere ku la dolce vita kumba.
3. Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru: kushandiswa, Bherujiyamu
Vamwe vanoti Bruges ndiro guta rakachengetedzwa kwazvo muEurope. Cobblestone migwagwa, dzimba dzine mavara, Gothic architecture, vese vanoita maBruges nzvimbo yakanaka yekufamba muEurope kwevakuru vafambi. Uyezve, pane magetsi aunogona kutora chikepe chekuyemura uye kuyemura maBruges pasina kuita danho, chiitiko chero mukuru anokoshesa. asi, kana uchiri kuda kutsvaga guta netsoka, hapana kunetseka, Bruges iguta rakaomarara. saka, yakanakira vafambi vakuru pane chero huwandu hwesimba.
Iwe unofanirwa kuzvitsaurira zvirinani 3-4 mazuva ekufamba nechikepe kuyambuka 80 yemakungwa eguta uye zorora pane Minnewater lake. Chimwe chiitiko chakakura muBruges musika wekutenga souvenir kumhuri.
Chikamu chepakati chechitima muBruges chinenge 10-20 maminitsi’ kufamba kubva pakati peguta, saka unogona kuenda chero kuBelgium uye UK.
Brussels kuBruges neTreni
Antwerp kuBruges neTreni
Brussels kuenda kuVienna neTreni
Ghent kune maBruges neTreni
4. Baden-Baden, Jerimani
Nezitima kubva kuParis, muBasel, Zurich, uye Munich, Baden-Baden guta rinowanikwa kwazvo kune vafambi vakuru. Nepo isiri hombe guta cosmopolitan seBerlin, ndiyo muenzaniso wehupenyu hwakanaka. Germany ndeyako 900 spa resorts, asi Baden-Baden's Resorts uye kirasi inobuda vese.
Zororo re spa muBaden-Baden ndiyo yakanakira nguva yezororo kune vafambi vakuru muEurope. Iyo yakadzikama nhanho, mineral uye matope spa kurapwa, gadheni rakanaka seParadies, gadzira chidimbu chedenga. zvisinei, kana iwe uchida kugara uchishanda pazororo, ipapo kune makorofu uye makirabhu emitambo mukati Baden-Baden kuti ushanyire.
Vafambi vakuru muEurope vangawana maguta mazhinji achinetseka kufamba-famba, nekuda kwemakomo uye ane nzira zhinji. saka, zvakakosha kuti unzwisise kana guta rezviroto zvako rakanyanya kunaka pane zvaunogona mumuviri. Kuenda kuguta rakakodzera-rine hushamwari muguta reEurope zvakangoita seinishuwarenzi yekufamba. Pamusoro pedu 7 maguta ekushanyira vakuru vafambi inonyora anowanikwa kwazvo maguta muEurope kune vakuru.
Berlin kuna Baden-Baden neTreni
Munich kuBaden-Baden neTreni
Zurich kuenda kuBaden-Baden neTreni
Basel kuenda kuBaden-Baden neTreni
5. Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru: Berlin, Jerimani
Minyuziyamu uye zvivakwa zvine chekuita neWWII uye nehondo inotonhora, ita Berlin nzvimbo inotyisa kune vafambi vakuru muEurope. Berlin yakatsetseka uye zvekufambisa zveruzhinji zvakanaka kwazvo, ose mabhazi uye epasi pevhu. Kana iwe uri pane yakanaka nhanho, unogona kuongorora iro guta parwendo rweSegway.
Mapaki mazhinji eBerlin akasvibira akakodzera tambo dzemasikati uye picnics, uye dzimba dzekutandarira iri sarudzo yakanaka kana uchida basa rakanyarara uye retsika pane kudzunga nzvimbo yakabatikana.
Frankfurt kuenda Berlin neTreni
Copenhagen kuBerlin neTreni
Hanover kuBerlin neTreni
Hambourg kuenda Berlin neTreni
Iine nzira dzayo dzinoshamisa, Amsterdam inogara iri nzvimbo yakakura yekufamba yekuenda kune vafambi vakuru muEurope. Amsterdam nderimwe remaguta akanakisa kushanyira muNetherlands, nekuda kwekudzoreka kwayo vibes uye saizi. Amsterdam idiki kana ichienzaniswa nemamwe maguta eEurope, saka haufanirwe kumhanya uye kunetseka nezvekuona.
Ukaneta neguta rakabatikana, musoro kunze kwedhorobha kune akakurumbira mamirimita kana AND tulip minda, kana uchifamba munguva yechirimo. Kana kana uri wakanaka muviri, kubhadhara bhasikoro uye kufamba bhasiketi kwakakomberedza guta rakanakisa iri rinotyisa zano.
7. Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru: Vienna, Ositiriya
Inoshamisa yekuvaka, dhanzi, uye dzimbahwe dzoumambo dzinoita kuti Vienna ive nzvimbo inoshamisa yekufamba kune vafambi vakuru. Kana iwe wasvika iyo yemahara yenhamo nguva muhupenyu apo iwe unogona kungo gara kumashure uye unakirwe nemichero yekushanda nesimba, tobva tananga kuVienna. Uyezve, Vienna ndiro guta rechipiri rinowanikwa muEurope kune vashanyi vakuru vane mafambiro mashoma.
Iyo Austrian kofi dzimba 'dzimba dzekugara' dzinoshanda makeke uye Austrian schnitzel, simbisa kuti iwe zvechokwadi uchave uine isingakanganwiki yehupfumi chiitiko. Kune iyo yetsika chikamu cherwendo shanyira iyo inotyisa opera imba ye show. Shure kwezvose, Vienna ndipo pakaita Mozart naSchubert vakanyora zvidimbu zvavo, iro guta remimhanzi uye neumhizha.
Muzinda weBelvedere ndeimwe yenzvimbo dzinofanira-kuona muVienna, yakakomberedzwa neminda yemaruva nezvitubu, iyo nzvimbo yekugara shure nekunakidzwa.
Pakati peguta panongo 5 maminetsi kubva kure pakati chechitima chiteshi. saka, kana urikusvika uchibva munyika dzakavakidzana, hapana chakareruka pane kuenda kuVienna.
Salzburg kuenda kuVienna neTreni
Munich kuenda kuVienna neTreni
Graz kuenda kuVienna neTreni
Prague kuenda kuVienna neTreni
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvezvitima tikiti matikiti uye mafambiro ekufamba kuenda kune chero maguta pane edu runyorwa.
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-visit-senior-traadors/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kutsiva iyo tr kuti pl kana nl uye mitauro yakawanda yesarudzo yako.